Ibsa_Qeerroofi_Qarree_Salaalee irraa Taayyee-Danda'aa Ilaalchisee | OROMIYAA TIMES
Ibsa_Qeerroofi_Qarree_Salaalee irraa Taayyee-Danda’aa Ilaalchisee
Leave a Comment	/ Oromia / By Chala Dandessa / January 24, 2020 January 24, 2020
Ibsa #Qeerroo-Salaale Irraa Darbe!
Taayyee Danda’aan waggaa 10 oliif mootummaa wayyaaneen mana hidhaatti dararamaa turuun waan haallamuu miti. Garuu qabsoo karaa nagaa qeerroon ykn uummanni oromoo taasiseen wayyaaneen aangoo irraa bu’ee Dhaabni OPDO fi Taayyeen mana hidhaadhaa hiikman. Gareen ODP caarraa kanatti fayyadamuun aangoo biyyatti erga harkatti galfatee Taayyenis garee ODP tti makamee hoggansa adda adda irratti ramadamee hojjechaa jira. Haata’u malee sababa hinbeekamneen jibbiinsa jawar mohammad fi beektota qabsoo qeerroo kana keessatti adda dureen shoora taphachaa turan irratti garee #facebook ijaarratee qaama mootummaas ta’ee ykn dhuunfan guyyaa guyyaan olola jibbiinsaa omishuu irratti argama. Sababa kanaan tokkummaan Oromoo akka laafuufi uummanni oromoo lagaan akka walqoodu balbala banee jira. Gochi isaa gocha Goobanni Minilik waliin ta’uun gosa Galaan cabsuu irra darbee oromiyaa mara akka cabsuuf shoora taphateefi gocha Soorii Geellaa Mootii Goojjam Taklahayimaanot waliin ta’uun Oromoo Wallagaa cabseen tokko jennee fudhanna. Goobanoonni sadeen kun kan walfakkeessu mootummaa biyya bulchutti(nafxanyaatti) maxxananii saba isaanii ciniinudha. Jallaa sabaa gosti takkaa biyyaa baasa, takkaa ajjeesee uummanni nagaa akka argatu godha. Yookiin qoqobbii hawaasummaa irra buusa. Taayyeen Keessattuu diina oromoo kan ta’e nafxanyoota waliin hiriiree beektota keenya maqaa xureessuun foonaa oromoo laaffisee foonaa diinaa ijaaruu irratti argama. Namni kun har’a ykn boru gocha fokkisaa kana irraa deebi’a jennee eegnus caalattuu summii jibbiinsaa facaasuun qeerroon girrisaa, WBO- shaneefi k.k.f jedhee jibichi dhale jedhee oduu sobaa ololaa oola. Badii mootummaafi nafxanyaan oromiyaa,dirree dawaaafi harara keessatti raawwachaa jiran jawaritti maxxansuun shira hangana hinjedhamne hoofaa jira. Keessattuu Uummata salaalee akka haadhatti isa guddise harma haadhaa ciniine jechuunii dandeenya. Diina waliin harmee oromiyaas ciniinee jira. Kanarraa ka’uun qeerroofi qarreen Salaalee Taayyen gocha isaa kana irraa nideebi’a jennee kallattiinis tahee alkallattiin gorsinus irraa deebi’uu hindandeenye.
Gochi isaa kun tokkummaa saba oromoo laaffisuurra darbee namoota dhuunfaa jidduutti jibba uumaa waan jiruuf ibsa kana akka baasnuf dirqamne.
Qabsoon Taayyee Danda’aa hanga aangoo ofii argatuufi firoota isaa hojii qabsiisutti tahuu waan hubanneef godina salaalee akka bakka nunbuune hubanne.Yeroo ammaa kana firoota isaa kanneen durbii 1ffaa, 2ffaa,3ffaafi gosa isaa hunda Baalee, Harargee fi Finfinneedhaa walitti funaanee seektara godina, aanaa Kuyyuu fi magaala G/G keessatti aangoo kennisiisafii jiraachuu uummanni salaalee nibeeka. Dabalataan Firoota kana gurmeessun lafa magaalaa G/G kennisiisafii akka jiru, Gama biraan Nafxanyaa waliin waliigaluun Hanga ammaatti konkolaataa 46 ol biyya alaatii galchuun daldala keessa galuun qabsoo isaa hanga faayidaatti tahuu numirkaneesse.
Yaada Taayyeen qabatee deemu foonaa qabsoo oromoo laaffisee foonaa diinaa ijaaraa waan jiruuf gocha inni fuula facebook irratti maxxansaa jiru nibalaaleffanna.
Taayyeen qaamaan salaaletti yaa dhalatuu malee yaadaan Bahar Daritti akka dhalatetti hubanna.
Yeroo ammaa kana godina keenyatti hattoota waayyaanee waliin uummata saamaa turan gurmeessee uummanni dirqamaan/humnaan ilaalcha PP akka fudhatu taasisuun gocha wayyaaneen hinraawwanne uummata salaalee irratti raawwachaa jiru akka dhaabu gaafanna. Yoo dhaabuu baate, Dura dhaabbannee falmanna.
Taayyeen kana booda hojii shiraatifis ta’ee maatii isaa bira gara Salaalee magaala Finfinnee ba’ee inxooxxoo yoo as darbe balaa isarra gahuuf qeerroon kan itti hingaafatamne ta’uu hubachiisna,
Qeerroofi qarreen godinaalee oromiyaa biroo Taayyee danda’aa kana booda uummata Salaalee akka bakka hinbuune, ta’uu isaa isin hubachiisna. Oromummaa isaatuu waan shakkinuuf hanga qorannee bu’aa isaa isin beeksisnutti obsaan nueegaa.
Taayyes tahee fakkaattonni ilaalcha Taayyee qabdan jawariifi beektota keenyarraa akka dhaabbattan waamicha isinii dabarsina. Qaama farra tokkummaa Oromoo ta’e kamuu nibalaaleffanna, duras dhaabbannee falmina.
Qeerroofi qarreewwan yaada taayyee tarkaanfachiisuuf faayidaan isin sossobaa jiruufi sodaachisoon ergama isaa fudhachuun socha’aa jirtan gocha kana irraa daftanii akka dhaabbattan cimsinee isini hubachiisna.
Uummanni Salaalee gabrummaa wayyaanee jalaa ba.e jedhee osoo gammaduu gartuun Taayyee uummata keenya gabrummaa nafxanyaa jalatti deebisuuf humna fayyadamanii sochiin godina keenyatti jalqabame qaami nageenyaa ergama taayyee irraa fudhatee uummata dararaa jira, mootummaan kun filannoo haala kanaan godina keenyatti karaa nagaan aangoo gadi dhiisan soba waan taheef ammumaa qeerroon uummata keenya qopheessuun mirga isaaf akka falmatu gochuudha.
Taayyeen inaaffaa siyaasaa isa qabeen torbee darbe beektonni fi jilli KFO gara godina Salaalee dhufanii uummata dubbisuun filannoof akka ofqopheessan sagantaa qabatanii turan irratti shira xaxuun akka hinmilkoofneef dhagaa inni hinfonqolchine hinjiru. Garuu hinmilkoofne. Aangoo qabutti fayyadamuun qaamolee nageenya (poolisiin) godinichaa akka nageenya hintiksine ajaja isaan dhorkisiisee ture, Qeerroo qofaan keessummaan dhufe nagaan galuu danda’eera. Garuu mootummaan PP sochiin uummata godinichaa humnaan bulchuuf karoorfatee amma hojjechaa jiru, qabsoo hadhawaa akka nugaafatu beeknee dura dhaabbachuuf qophaa’uu keenya ibsina.
Qeerroon Salaalee, uummanni keenya dhiibbaa tokko malee dhaaba siyaasa barbaade bilisaan filachuufi fi filatamuu akka qaban amanna. Anatu sibeekaan mootummaa wayyaanee irratti dhaabbatee jira.
Qeerroofi Qarree Salaalee Irraa